Ilabhulali Yokuqukethwe: Kuyini? Futhi Kungani Isu Lakho Lokumaketha Okuqukethwe Liyahluleka Ngaphandle Kwalo | Martech Zone
Eminyakeni edlule besisebenza nenkampani ebinama-athikili ayizigidi eziningana ashicilelwe kusayithi labo. Inkinga kwaba ukuthi zimbalwa kakhulu izindatshana ezifundiwe, zibalwa ngisho nangaphansi ezinjini zokusesha, futhi ngaphansi kwephesenti elilodwa kuzo kube nemali etholwe yizo.
Ngingakuphonsa inselelo yokuthi ubuyekeze umtapo wakho wokuqukethwe. Ngikholwa ukuthi uzomangala ukuthi amaphesenti wamakhasi wakho athandwa kangakanani futhi ahlanganyele nezethameli zakho, ingasaphathwa eyamakhasi akleliswe ezinjini zokusesha. Sivame ukuthola ukuthi amaklayenti ethu amasha abeka imigomo enophawu kuphela, futhi asebenzise izinkulungwane zamahora kokuqukethwe okungafundwa muntu.
Leli klayenti elithile belinabasebenzi bokuhlela abagcwele nabalobi… kepha bebengenalo isu eliphakathi ini ukubhala. Bamane babhala ngezihloko abazithola zithakazelisa ngokwabo. Siphenye okuqukethwe kwabo sathola nezinkinga ezithile ezikhathazayo… sithole ama-athikili amaningi avela kuma-athikili ahlukile ngesihloko esifanayo. Ngemuva kwalokho sathola ithani lezindatshana ezazingabalwa, zazingenakho ukuzibandakanya, futhi zabhalwa kabi. Baze baba nezakhiwo ezimbalwa kanjani-to izindatshana ezazingenazo ngisho izithombe ezifakiwe.
Asizange sincome ngokushesha isixazululo. Sababuza ukuthi singalwenza yini uhlelo lokuhlola lapho sisebenzisa khona ama-20% ezinsizakusebenza zegumbi labo lezindaba ekwenzeni ngcono nasekuhlanganiseni okuqukethwe okukhona kunokubhala okuqukethwe okusha.
Inhloso bekuwukuchaza i- umtapo wokuqukethwe - bese kuba nendatshana eyodwa ephelele nephelele esihlokweni ngasinye. Kwakuyinkampani kazwelonke, ngakho-ke sacwaninga isihloko ngokususelwa kuzithameli zabo, amazinga abo okusesha, isikhathi sonyaka, indawo, kanye nabancintisana nabo. Sinikeze uhlu oluchaziwe lokuqukethwe, okuhlelwe njalo ngenyanga, obekubekwa phambili kucwaningo lwethu.
Kusebenze njengentelezi. Izinsizakusebenza ezingama-20% esizisebenzisile ukwakha umtapo wolwazi ophelele weqise ngama-80% wokunye okuqukethwe okwenziwe ngengozi.
Umnyango wokuqukethwe usukile ku:
Kungakanani okuqukethwe esizokukhiqiza isonto ngalinye ukuhlangabezana nezinjongo zokukhiqiza?
Futhi kudluliselwe ku:
Yikuphi okuqukethwe okufanele sikusebenzise futhi sikuhlanganise ngokulandelayo ukukhuphula inzuzo ekutshalweni kokuqukethwe?
Kwakungelula. Saze sakha injini enkulu yokuhlaziya idatha ukukhomba ukuhleleka okubekwe phambili kokukhiqizwa kokuqukethwe ukuqinisekisa ukuthi sithola i-ROI enhle kakhulu kuzinsizakusebenza zokuqukethwe. Wonke amakhasi ahlukaniswa ngegama elingukhiye, amagama angukhiye abekwe ohlwini, i-geography (uma kuhlosiwe), ne-taxonomy. Sibe sesikhomba okuqukethwe okubekwe emazingeni wokuncintisana - kepha akuzange kukalwe kahle.
Kuyathakazelisa ukuthi ababhali nabahleli nabo bayayithanda. Banikezwe isihloko, okuqukethwe okukhona okufanele kuqondiswe ku-athikili entsha ephelele, kanye nokuqukethwe okuncintisanayo okuvela kuwebhu yonkana. Ibanikeze lonke ucwaningo abaludingayo ukuze babhale i-athikili ebandakanya kangcono kakhulu, ejulile.
Kungani Kufanele Wakhe Umtapo Wezincwadi Wokuqukethwe
Nayi ividiyo emfushane yokwethula ukuthi uyini umtapo wezincwadi nokuthi kungani isu lakho lokumaketha okuqukethwe kufanele lifake le ndlela.
Izinkampani eziningi ziqoqa izindatshana ngezihloko ezifanayo ngokuhamba kwesikhathi, kepha isivakashi sesiza sakho ngeke sichofoze futhi sizulazule ukuthola imininingwane abayidingayo. Kubalulekile ukuthi uhlanganise lezi zihloko zibe yinto eyodwa, ephelele, ehleleke kahle master esihlokweni ngasinye.
Ungayichaza Kanjani Ilabhulali Yakho Yokuqukethwe
Ngomkhiqizo noma insizakalo yakho, isu lakho lokuqukethwe kufanele lihlanganyele esigabeni ngasinye se- uhambo lomthengi:
Ukuhlonza Inkinga - ukusiza umthengi noma ibhizinisi ukuthi aqonde kangcono inkinga yakhe ngokuphelele kanye nobuhlungu obukubangela wena, umndeni wakho, noma ibhizinisi lakho.
Isixazululo Ukuhlola - ukusiza umthengi noma ibhizinisi ukuqonda ukuthi inkinga ingaxazululwa kanjani. Kusuka kuvidiyo ethi 'kanjani' ngemikhiqizo noma izinsizakalo.
Izidingo Zokwakha - ukusiza umthengi noma ibhizinisi ukuthi liqonde ukuthi lingasicubungula kanjani ngokuphelele isisombululo ngasinye ukuqonda ukuthi yini elungele bona. Lesi yisigaba esihle lapho uthola khona ukugqamisa umehluko wakho.
Ukukhethwa Kwabahlinzeki - ukusiza umthengi noma ibhizinisi aqonde ukuthi kungani kufanele akhethe wena, ibhizinisi lakho, noma umkhiqizo wakho. Yilapho ufuna ukwaba khona ubuchwepheshe bakho, izitifiketi, ukuqashelwa okuvela eceleni, ubufakazi bamakhasimende, njll.
Kwamabhizinisi, ungahle uthande nokusiza umuntu ocwaningayo ukuthi aqonde ukuthi angaqinisekisa kanjani umncintiswano wakho ngamunye futhi akubeke phambi kweqembu lakhe ukuze akhe ukuvumelana.
izigaba eziklanywe kahle futhi kulula ukuskena ngazo kusuka kusihlokwana kuya kusihlokwana.
Ucwaningo kusuka emithonjeni eyinhloko neyesibili ukunikeza ukwethembeka kokuqukethwe kwakho.
Uhlu olunamachashazi ngamaphuzu ayisihluthulelo endatshana achazwe ngokucacile.
Okwesithombe. Isithonjana esimele ukwabelana, imidwebo, nezithombe lapho kungenzeka khona kulo lonke i-athikili ukukuchaza kangcono nokwakha ukuqonda. I-Micrographics ne-infographics kwakungcono nakakhulu.
Ividiyo nomsindo ukunikeza ukubuka konke noma incazelo emfushane yokuqukethwe.
Ngokusebenza neklayenti lethu, a ukubalwa kwamagama bekungeyona inhloso enkulu, lezi zihloko zisuke emakhulwini ambalwa zaya ezinkulungwaneni ezimbalwa zamagama. Izindatshana ezindala, ezimfishane, ezingafundiwe ziye zalahlwa futhi zaqondiswa kuma-athikili amasha, acebile.
I-Backlinko ihlaziye imiphumela engaphezu kwesigidi esingu-1 futhi ithole ukuthi isilinganiso sekhasi elingu- # 1 linamagama ayi-1,890
Le datha ixhase isisekelo sethu kanye nokutholakele kwethu. Kuguqulwe ngokuphelele ukuthi sibheka kanjani ukwakha amasu wokuqukethwe wamakhasimende ethu. Asisenzi inqwaba yocwaningo nokukhiqiza ngobuningi izindatshana, ama-infographics namaphepha amhlophe. Sihlela ngamabomu a umtapo wolwazi yamakhasimende ethu, ahlolisise okuqukethwe kwawo kwamanje, abeke phambili izikhala ezidingekayo.
Noma kuqhubeke Martech Zone, senza lokhu. Ngangivame ukuziqhayisa ngokuba nokuthunyelwe okungaphezulu kuka-10,000. Uyazi yini? Sinciphise ibhulogi cishe kokuthunyelwe okungu-5,000 futhi siyaqhubeka nokubuyela emuva masonto onke futhi sicebisa okuthunyelwe okudala. Ngoba ziguqulwe kakhulu, siziphinda sizishicilele njenge new. Ngokwengeziwe, ngoba imvamisa vele bakala futhi banama-backlinks kubo, bayakhuphuka emiphumeleni yenjini yokusesha.
Ukuqala Ngecebo Lakho Lelabhulali Yokuqukethwe
Ukuqala, ngincoma ukuthatha le ndlela:
Ayini amathemba namakhasimende acwaninga online mayelana isigaba ngasinye ohambweni lomthengi lokho kuzoholela kubo noma izimbangi zakho?
Ini ama-mediums kufanele ufake? Izindatshana, imidwebo, amaphepha okusebenzela, amaphepha amhlophe, izifundo zamacala, ubufakazi, amavidiyo, ama-podcast, njll.
Ini zamanje okuqukethwe onakho kusayithi lakho?
Ini ucwaningo ungafaka kulo mbhalo ukuqinisa nokwenza ngezifiso okuqukethwe kwaso?
Esigabeni ngasinye naku-athikili ngayinye, yini injini yokusesha ukuncintisana'izihloko zibukeka kanjani? Ungaklama kanjani kangcono?
Ukubhala mayelana wenaInkampani njalo ngesonto ngeke isebenze. Kufanele ubhale ngamathemba akho namakhasimende akho. Izivakashi azifuni ukuba kuthengiswa; bafuna ukwenza ucwaningo futhi bathole usizo. Uma ngithengisa ipulatifomu yokumaketha, akukhona nje ukuthi yini esingayifeza noma lokho amaklayenti ethu akwenzayo ngokusebenzisa isoftware. Yindlela engiwuguqule ngayo umsebenzi weklayenti lami nebhizinisi abalisebenzele.
Ukusiza amakhasimende akho nethemba lakho yilokho okwenza izilaleli zakho zibone ubuchwepheshe negunya embonini. Futhi okuqukethwe kungenzeka kunganqunyelwe ekutheni imikhiqizo yakho nezinsiza ziwasiza kanjani amakhasimende akho. Ungahle ufake nokuthi yini ongayifaka kuma-athikili omthethonqubo, umsebenzi, ukuhlanganiswa, kanye nanoma yisiphi esinye isihloko amathemba akho abhekene naso emsebenzini.
Ungazicwaninga Kanjani Izihloko Zakho Zelabhulali Yokuqukethwe
Ngihlala ngiqala ngezinsizakusebenza ezintathu zocwaningo ngokuqukethwe engikuthuthukisayo:
Ucwaningo lwezinto eziphilayo kusuka ku- Semrush ukukhomba izihloko nezindatshana eziseshwa kakhulu ezihlotshaniswa nethemba engifisa ukulikhanga. Gcina uhlu lwama-athikili asezingeni lusebenza futhi! Uzofuna ukuqhathanisa i-athikili yakho ukuqinisekisa ukuthi ungcono kunabo.
Ucwaningo olwabiwe ngokwenhlalo oluvela kuBuzzSumo. I-BuzzSumo ilandelela ukuthi ama-athikili abiwa kangaki. Uma unganqamula ukuthandwa, ukwabiwa, bese ubhala i-athikili enhle kakhulu esihlokweni - amathuba akho okuthi ikhiqize ukuzibandakanya nemali engenayo aphezulu kakhulu. IBuzzSumo ibhale i-athikili enhle muva nje yokuthi ungayisebenzisa kanjani Ukuhlaziywa Kokuqukethwe.
Comprehensive ukuhlaziywa kwentela ukuqinisekisa ukuthi i-athikili yakho ihlanganisa zonke izihlokwana ezihlotshaniswa nesihloko. Hlola Phendula umphakathi ngocwaningo oluthile olumangazayo ngentela yezihloko.
Yakha uhlu olukhulu lwalezi zihloko, uzibeke phambili ngokubaluleka, bese uqala ukusesha isiza sakho. Ingabe unokuqukethwe okuthinta leso sihloko? Ingabe unokuqukethwe okuklelamagama asemqoka ahlobene? Uma kungathuthukiswa - bhala kabusha izindatshana ezicebile, eziphelele ngokwengeziwe. Ngemuva kwalokho phatha okuqukethwe okusiza amathemba akho namakhasimende ngokulandelayo.
Yakha ikhalenda lakho lokuqukethwe ngezinto eziza kuqala. Ngingancoma ukuhlukanisa isikhathi phakathi kokuvuselela okudala nokubhala okusha kuze kube yilapho umtapo wezincwadi wakho usuqedile. Futhi ngenxa yokushintsha kwezindawo zebhizinisi, ukuthuthuka kwezobuchwepheshe, nokuncintisana - kuhlale kunezihloko ezintsha ongazengeza kulabhulali yakho.
Njengoba uhlanganisa ama-athikili amadala abe yimibhalo emisha, ebanzi, qiniseka ukuthi ufaka ama-athikili amadala ngokuqondisa kabusha. Imvamisa ngicwaninga ukuthi i-athikili ngayinye ikleliswe kanjani bese ngisebenzisa i-permalink esezingeni eliphezulu kakhulu ye-athikili entsha. Lapho ngenza lokhu, izinjini zokusesha zivame ukubuya futhi zikubeke ngaphezulu. Bese kuthi lapho ithandwa, ikhuphuke ngokweqile ngezinga.
Okuhlangenwe nakho kwakho kokuqukethwe
Cabanga ngendatshana yakho njengoba umshayeli wendiza ezongena ngokufika. Umshayeli wendiza akagxili phansi… uqala afune izimpawu zomhlaba, ehle, abese egxila kakhudlwana kuze kube yilapho indiza isithinte phansi.
Abantu abaqale bafunde i-athikili igama negama, bona ukuskena it. Uzofuna ukusebenzisa izihloko zezindaba, ukugqama, ukugcizelela, ukuvimba izingcaphuno, izithombe, namaphoyinti ezinhlamvu ngempumelelo. Lokhu kuzokwenza abafundi bahlole amehlo bese begxila. Uma kuyindatshana ende impela, ungahle uthande nokuyiqala ngethebula lokuqukethwe okungamathegi okubambelela lapho umsebenzisi angachofoza khona bese eqa esigabeni asithandayo.
Uma ufuna ukuba nomtapo wezincwadi ongcono kakhulu, amakhasi akho kufanele abe amangalisa. Indatshana ngayinye kufanele ibe nayo yonke iminyango edingekayo ukuthinta ngokuphelele isivakashi futhi ibanikeze imininingwane abayidingayo. Kufanele ihleleke kahle, ibe ngochwepheshe, futhi ibe nokuhlangenwe nakho okwehlukile komsebenzisi uma iqhathaniswa nabancintisana nabo:
Ungakhohlwa ukubizelwa kwakho esenzweni
Okuqukethwe akusizi ngalutho ngaphandle kokuthi ufuna ukuthi umuntu athathe isinyathelo ngakho! Qiniseka ukuthi wazisa abafundi bakho ukuthi yini elandelayo, iziphi izehlakalo ozoza nazo, ukuthi bangahlela kanjani i-aphoyintimenti, njll.
Tags: backlinkoumtapo wokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweisu lokukhangisa lokuqukethweukukhiqizwa kokuqukethweisikhundla se-googlemangaki amagama okufanele okuthunyelwe kubhulogi kubeumtapo wolwaziucwaningosemrushigama lokubala